सडकमा भि’ख माग्ने यी युवक करोडपति निस्किएपछि… सामाजिक संजालमा खैलाबैला ! « गोर्खाली खबर डटकम
सडकमा भि’ख माग्ने यी युवक करोडपति निस्किएपछि… सामाजिक संजालमा खैलाबैला !
हरियाणा। हरियाणाको अम्बाला केन्टमा पुरानो अनाज मण्डीको मन्दिर बाहिर दुई वर्षदेखि भि’ख मागिरहेका युवक करोडपति भएको पाइएको छ । दुई बहिनीका एक्ला दाजु आजमगढका निवासी भएको खुलेको छ । उनको वास्तविक नाम धनंजय ठाकुर हो तर मण्डी आउने जाने स्थानीयहरुले उनलाई जटाधारी भन्थे ।
उनका पिता राधेश्याम सिंह कोलकाताको एक ठूलो कम्पनीमा एचआर म्यानेजर छन् । शुक्रबार धनन्जयकी बहिनी नेहा सिंह उनलाई लखनउबाट लिन आएपछि एक्ला दाजुसँग वि’छोडिएपछि फेरि भेटिँदासम्मको रोचक कहानीको खुलासा भयो ।
बिहीबार धनंजयको खुट्टाबाट र’गत बगिरहेको देखेपछि गीता गोपाल संस्थाका सदस्य साहिलले उनलाई पट्टि लगाइदिन नजिक बोलाए । यही क्रममा साहिलले उनीसँग उनको घर परिवारबारे सोधे । मानसिक स्थिति ठिक नभएका धनन्जयले यसबारे बताउन सकेनन् । तर, उनले केहीबेर सम्झिएपछि एक मोवाइल नम्बर बताए । यो नम्बर आजमगढमा कनेक्ट भयो ।
फोनमा साहिलले धनंजयको बारेमा कुरा गर्दा थाहा भयो कि फोन उठाउने शिशुपाल धनंजयका ठूलोबा थिए । उनैले युवकको नाम धनंजय बताए । धनंजय २ वर्ष पहिले घरबाट ह’राएका थिए । शुक्रबार धनंजयकी बहिनी नेहा उनलाई लिन हरियाणा पुगिन् । दाजु मन्दिरबाहिर बसेका थिए । दाह्री र कपाल बढेका थिए । बहिनीलाई देख्नासाथ धनंजयले उनलाई चिने ।
हेर्नुहोस् पछिल्लो २४ घण्टाको कोभिड अपडेट
यस्ता लक्षण देखिए हुनसक्छ काे-राेना भाइरसको संकेत, सामान्य नठान्नुहोस् !